Shiinaha warshad farsameysan pinis warshad iyo soosaarayaasha | Kingtai
Maxaa Sawirro Loogu Xidhay Xidhmooyinka? Waa doorashada ugu fiican in sawir la sameeyo biinanka dedan haddii aad rabto biinanka jilibka fudud ee leh faahfaahinta cad.
Waxay ka duwan tahay biinanka 'Cloisonne', ee la qaabeeyey, Sawirka la sawiray Lapel Pins wuxuu si toos ah ugu xardhay naqshadda dusha sare ee biraha iyada oo aan la helin xargaha iyo waxyeellada dooxada.
Tani waxay kordhisaa xaddiga faahfaahinta ee naqshadeynta soo bandhigi karto. Waxaan bilaabaynaa inaan adeegsanno qalab casri ah oo kumbuyuutar lagu xakameeyo si aan ugu xirno saldhigga birta ee qaabeyntaada.
Waxaan markaa buuxinaynaa midabka aad dooratay waxaanan ku gubi doonaa biinanka dabka si loo hagaajiyo dhaldhalaalka loona hubiyo adkeysiga.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, biinankayaga dhalaalaya iyo adeegsiga epoxy difaaca ayaa si cad loo dhammeeyey si loogu daro cimri dherer dheeraad ah iyo ilaalinta biinankaaga caadada ah. Aynu ku tusno sida ay u weyn yihiin musmaarradeenna sawir qaadista miisaanka leh!
Sawir-qaadista ama farsamaynta kiimikada (PCM) waa geedi socod kiimiko ah. Nidaamkani wuxuu soo saari karaa farshaxan aad u wanaagsan iyo saxnaan aad u wanaagsan.
Marka loo barbardhigo feer, feer, leysarka ama goynta diyaaradda biyaha, lithography waa hab kharash-ku-ool ah. Nidaamku wuxuu qeexayaa talaabooyinka soo socda: Qalabka biinanka, badiyaa naxaas ama naxaas ah, wuxuu leeyahay muuqaal filim khafiif ah oo loo wareejiyay, sawir qaade, qalab sawir leh oo lagu daboolay habsami u socodka mashruucaaga. Iftiinka UV wuxuu sii adkeyn doonaa qalabka wax lagu sawiro.
Qaybaha aan la ilaalin ayaa markaa lagu daboolaa xalka aashitada. Naqshadeynta ayaa si dhakhso leh u xumaatay. Asiidhyada haray iyo wasakhda waa la tirtiray si loo helo badeecad sax ah.
Godadka la jeexay waxaa ka buuxa rinjiga dhaldhalaalka, midba mar. Tan waxaa lagu sameeyaa siriinj. Badeecadani waxaa lagu sameeyaa foorno.
Kadibna waa loo gooyaa cirbadaha shaqsiyeed waana la safeeyey. Waqtigan xaadirka ah, waxaad dooran kartaa inaad ku darto daahan epoxy si looga hortago xirashada.
Faa'iidooyinka cirbadaha sawir-qaadista sawir-qaadeyaasha sawir-qaadeyaasha ayaa ku habboon naqshadaha aadka u murugsan (hooska iyo muuqaalkaba ma leh).
Waxay sidoo kale bixiyaan midabyo kala duwan oo laga kala xusho. Sawirqaadeyaasha lagu daray way ka fududyihiin noocyada kale ee biinanka maxaa yeelay waxaa laga dhigay khafiif.
Tani waxay noqon kartaa faa iidada nashqadeynta weyn! Ama, haddii aad rabto inaad ku darto hooska ama jadwalka qaabkaaga, waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso biinanka daabacaadda.
Haddii biinanka sawirku ku habboon yahay adiga, markaa waxaan kugu martiqaadeynaa inaad na siiso naqshaddaada! Waxaan ku siineynaa tixraacyo bilaash ah dhammaan alaabadayada.
Hore: Biinanka biligleynaya
Xiga: Rhinestone lapel pin